Arrin yaqyaqsi lagu tilmaamay oo uu Hindiya ka sameeyey siyaasi Muslim ah & dood ka dhalatay (Daawo) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Arrin yaqyaqsi lagu tilmaamay oo uu Hindiya ka sameeyey siyaasi Muslim ah...
Arrin yaqyaqsi lagu tilmaamay oo uu Hindiya ka sameeyey siyaasi Muslim ah & dood ka dhalatay (Daawo)
(Hadalsame) 05 Juun 2022 – Zameer Ahmed Khan, oo ah xildhibaan ka tirsan Xisbiga Congress-ka dalka Hindiya gaar ahaanna laga soo doorto Bengaluru Chamrajpet, ayaa cunay cunto uu afkiisa ku calaliyey nin wadaad ah oo ka tirsan dadka la takooro ee Dalit-ka Narayana Swamiji.
Ujeedka siyaasigan Muslimka ah ee Zameer Khan ayaa ahayd inuu diro farriin walaaltinimo iyo sidoo kale la dagaallanka takoorka ba’an ee lagu hayo qowmiyadda Dalit-ka oo lagu naanayso ”Dadka aan la taaban” munaasabad dadweyne oo loogu dabaaldegayey Ambedkar Jayanti iyo waxa ay u yaqaannaan Eid Milan.
Yeelkeede, Khan, oo afar jeer ah kusoo baxay xildhibaanka MLA, ayaa sidoo kale soo noqday Wasiiru-dowlaha Cuntada iyo Saadka Rayidka, Arrimaha Macaamiisha, iyo Daryeelka Dadka laga Tirada badan yahay ee Karnataka ayay arrintiisu dood dhalisay.
Dadwaynaha ayaa laba sababood dartood ku diidey tillaabada uu qaaday Zameer Khan oo dhacday dhammaadkii bishii hore balse weli doodi ka joogto, kuwaas oo ay midi tahay inay yaqyaqsi iyo caafimaad darro tahay cunista cunto uu qof kale afkiisa ku calaliyey iyo tan 2-aad oo ah in tillaabadan laga leeyahay ujeeddo siyaasadeed ee aanay runtii ahayn mid wax lagaga qabanayo takoorka lagu hayo dadkan Dalit-ka ee gaarka loo sooco dalka Hindiya.
Previous articleMa taqaannaa geed ka baxa dhulka Soomaalida oo ay dunidu aad u daraasadayso una qaadato faa’iidooyinkiisa faraha badan dartood?!! + Sawirro
Next articleRuushka oo muddo kaddib markale duqaymo ka bilaabay Kiev & sababta oo uu sheegay + Sawirro